:Bọchị: Nọvemba 21, 2019
Ọtụtụ n’ime anyị amataghị akụkọ ịpụta amamịghe nke mechara bụrụ ire anyị. Bịanụ, ka anyị gaa njem oge gaa na 1800's Istanbul ma mụta otu nkwupụta barn Dban si dozie n'asụsụ anyị. Kalenda 3 [More ...]
Oge togbọ elu na ọdụ ụgbọ elu Istanbul gbatịkwuru… Akwụ ụgwọ Turkish ụgbọ elu; French ikuku okporo ụzọ na usoro ke ibuo ogbo "jikota Point" akanyam na Turkey. Usoro ga-ebelata oge ụgbọ elu. 3 puku lekwasịrị ụgbọ elu ikuku puku kwa ụbọchị n’ọdụ ụgbọ elu Istanbul [More ...]